कोरोनाबाट इटालीमा थप २ सय ५० को मृत्यु, विश्वभर ५ हजार ५ सयको मृत्यु ! – Sagarmatha Online News Portal
कोरोनाबाट इटालीमा थप २ सय ५० को मृत्यु, विश्वभर ५ हजार ५ सयको मृत्यु !
काठमाडौं । चीनको वुहान शहरबाट सुरु भएर विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को संक्रमणका कारण इटालीमा थप २ सय ५० जनाको मृत्यु भएको छ । योसँगै इटालीमा कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाउनको संख्या १ हजार २ सय ६६ जना पुगेको छ ।
इटाली चीनपछि कोरोना भाइरसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित देश हो । त्यहाँ हालसम्म १७ हजार ६ सय ६० जनामा कोरोनाको संक्रमण भएको छ । इटालीमा २ हजार ५ सय ४७ जना नयाँ संक्रमित भेटिएका छन् । इटालीपछि सबैभन्दा धेरै इरानमा ८५, स्पेनमा ४७, फ्रान्समा १८, अमेरिकामा ७ र दक्षिण कोरियामा ५ जनाले पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन् ।
कोरानाका कारण चीनमा अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै ३ हजार १ सय ७७ जनाको मृत्यु भएको छ । तर चीनमा नयाँ संक्रमित हुनेहरुको संख्या ह्वात्तै घटेको छ । शुक्रबार चीनमा कोरोनाका कारण १ जनाको पनि मृत्यु भएको छैन भने १० जनामा नयाँ संक्रमण फेला परेको छ ।
हालसम्म विश्वभर कोरोनाको संक्रमणबाट ५ हजार ४ सय १८ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । जसमध्ये शुक्रबार मात्रै ४ सय ३६ जनाको मृत्यु भएको छ । विश्वभर १ लाख ४५ हजार ४ सय ४४ जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ, भने ती मध्ये १० हजार ८ सय ६७ नयाँ संक्रमित हुन् । झण्डै ७१ हजार व्यक्ति निको भएर घर फर्केका छन् ।
गत डिसेम्बरको अन्त्यतिर चीनको वुहान क्षेत्रमा पहिलो पटक देखिएको कोरोनाको संक्रमण १ सय २९ देशमा फैलिसकेको छ । पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको उद्गमस्थल चीनमा कोरोनाको संक्रमण दर उल्लेख्य मात्रामा घटेको छ । योसँगै चीन सरकारले कोरोनाको माहामारीबाट मुक्त भएको घोषणा गरिसकेको छ । चीन र दक्षिण कोरियामा कोरोनाको प्रभाव कम हुँदै गएपनि युरोपेली, अमेरिकी तथा अन्य एसियाली देशहरुमा भने यो तीब्र गतिमा फैलिरहेको छ ।
Published On: १ चैत्र २०७६, शनिबार